Fanononana Winnie-the-Pooh 20 mendri-piderana tokoa mba hitsiky anao - Quotes
Fanononana Winnie-the-Pooh 20 mendri-piderana tokoa mba hitsiky anao
Angamba isika olon-dehibe dia mila mamerina mijery ny tontolon'ny literatiora sy ny fahitalavitra ary ny sarimihetsika indray mandeha indraindray satria misy fahendrena mahagaga azo avy amin'izy ireo.
Mpanoratra A.A. Milne dia namorona ny sasany amin'ireo olona manana fieritreretana sy lalina indrindra rehefa nanoratra ny lahatsorany Winne-the-Pooh izy ary maro amin'ireo teny nalaina avy tao no manana lesona fiainana azontsika rehetra ianarana avy.
Ny sasany amin'ireny, ary ny hafa avy amin'ny fanovana animated manaraka, dia hita eto ambany. Raha vantany vao manomboka mamaky azy ireo ianao, dia hoentin'ny rivotra lalina sy feno dikany izy ireo.
Raha ray aman-dreny ianao dia angamba tokony hieritreritra ny handinika ireo boky, andian-tantara amin'ny televiziona ary sarimihetsika hampahafantarana ny zanakao ny zava-mahatalanjona an'ity bera any anaty ala ity. Amin'izao fotoana izao dia ankafizo ireto fitanisana 20 an'i Winnie-the-Pooh ireto.
Manoro hevitra anao aho haka ny kopian'ny The Tao of Pooh satria tsy isalasalana fa hankafizinao izany raha mankafy ny teny etsy ambany ianao. Ity no rohy mankany aminy ao amin'ny Amazon.com ary azonao atao tadiavo eto amin'ny Amazon.co.uk
“Ahoana no fomba fanoratra ny‘ fitiavana ’?” - Piglet
'Tsy tsipelinao ilay izy… tsapanao izany.' - Pooh
Amin'ny fahatokisana ny fahaizanao miatrika na inona na inona:
Mampanantena ahy ianao fa ho tadidinao foana: Be herim-po noho ny inoanao ianao, ary matanjaka noho ianao toa, ary hendry noho ny eritreretinao.
Ny maha-zava-dehibe ny zavatra kely:
Indraindray, hoy i Pooh, ny zavatra kely indrindra dia manome ny toerana betsaka indrindra ao am-ponao.
“Andro firy izao?”
'Androany izao', hoy i Piglet nibitsibitsika.
'Andro tiako indrindra,' hoy i Pooh.
Te-hahatsapa tadiavin'ny sipako aho
Amin'ny zava-poana amin'ny ahiahy:
“Raha misy hazo nianjera, Pooh, fony teo ambaniny izahay?”
'Raha heverina fa tsy izany,' hoy i Pooh taorian'ny fisaintsainana tsara.
Nahazo fampiononana i Piglet tamin'io.
Amin'ny fahalalana amin'ny maha-tsotra:
Indraindray, raha mijoro eo amin'ny farany ambany amin'ny tetezana ianao ary miankohoka mijery ilay renirano misosa miadana eo ambaninao, dia ho fantatrao tampoka izay rehetra tokony ho fantatra.
maninona no te handratra anao ny mpifoka rongony
Amin'ny maha-izy azy:
Ireo zavatra mampiavaka ahy dia ireo zavatra mampiavaka ahy.
Ny mahasamihafa ny fahalalana sy ny fahazoana:
'Malina ny bitro,' hoy i Pooh nieritreritra.
'Eny,' hoy i Piglet, 'fetsy Rabbit.'
'Ary manana ny atidohany izy.'
'Eny,' hoy i Piglet, 'manana atidoha ny bitro.'
Nisy fahanginana lava.
'Heveriko,' hoy i Pooh, 'fa izay no antony tsy ahazoany mihintsy.'
Tamin'ny satria fantatrareo fa tsy mila na iza na iza hafa hamita anao:
Nandehandeha nitady olona aho, ary tampoka teo dia tsy teo intsony aho.
Fanangonana fanamarihana lehibe kokoa (mitohy etsy ambany ny teny notsongain'i Pooh):
Rivotra 13 manamarina tanteraka ny fiainana ao amin'ny Willows
Alice Mahagaga 25 ao amin'ny Wonderland Quotes To Live Life By
Mandeha mihemotra vitsivitsy angamba ny fitiavana mety mbola bebe kokoa aza… mba hanomezana lalana ny fahasambaran'ilay olona tianao.
Tsikaritr'i Piglet fa na dia manana fo kely aza izy dia afaka mitana fankasitrahana betsaka.
Amin'ny faritra mampionona:
Tsy afaka mijanona eo amin'ny zoron'ny Ala ianao miandry ny olon-kafa hanatona anao. Mila mandeha any amin'izy ireo ianao indraindray.
Amin'ny tsy misaina loatra:
Indraindray aho mipetraka ary mieritreritra, ary indraindray mipetraka fotsiny…
Amin'ny tsy fitiavan-tena:
Ny fiheverana kely, ny eritreritra kely ho an'ny hafa, no mahasamihafa azy.
Amin'ny harena amin'ny fiainanao:
Tena sambatra aho manana zavatra mahatonga ny manao veloma tena mafy.
Amin'ny fanadiovana ny eritreritrao rehetra:
Aza atao ambanin-javatra ny hasarobidin'ny tsy fanaovan-javatra, ny fandehanana fotsiny, ny fihainoana ireo zavatra rehetra tsy henonao, ary ny tsy fanelingelenana.
ny fomba hilazana ny fitiavana avy amin'ny filan'ny nofo
Amin'ny sandan'ny nofy:
Mieritreritra aho fa manonofy ka tsy mila misaraka ela loatra. Raha mifanofinofy isika dia afaka miaraka foana.
Ny tombotsoan'ny tsy micromanaging zava-drehetra:
Ny iray amin'ireo tombony azo amin'ny tsy fandaminana dia ny fahitana fahagagana foana.
Ny amin'ny hatsarana ao anatin'ny kanto:
Fa tsy mora izany, hoy i Pooh. Satria ny tononkalo sy ny hum dia tsy zavatra azonao, zavatra izay mahazo anao. Ary ny hany azonao atao dia ny mandeha any amin'izay hahitan'izy ireo anao.
Amin'ny fahitana fifaliana amin'ny zavatra rehetra:
Tsy misy afaka ny ho uncheered amin'ny baolina fingotra kilalao.
Izaho dia mandrisika hangorona ny gazety Ny Tao ny Pooh ho azo antoka fa ianao hankafy izany raha mankafy ny fitanisàna eto ambany. Ity no rohy mankany aminy ao amin'ny Amazon.com ary azonao atao tadiavo eto amin'ny Amazon.co.uk
ahoana no hianaranao matoky indray
ny fomba ahazoana fo maharary
ahoana Lazaiko izy tia ahy
ny fomba hamaliana ny dia meloka
rehefa mamitaka amin'ny narcissist